'त्यतिबेलै नेपाल सरकारले लिपुलेक नेपालको हो भनेको थियो' | Citizen Post News
डा. दीनेश भट्टराई, परराष्ट्र विज्ञ तथा राजदूत
यो समस्या एकाएक आएको हो ?
समस्या एकाएक आएको नभई पहिलादेखिकै हो । अहिले फैलिँदै आएर छताछुल्ल भएको हो । नेपालले यस विषयमा चीन र भारतसँग पहिले नै कुरा गर्नुपर्ने थियो । समयमै बोध गरेनौं र यसले राष्ट्र हितमा के समस्या पार्छ भन्ने पनि नबुझेकै कारण अहिले समस्या आएको हो । सरकारले खोज, अनुसन्धान र विचारको मन्थन पनि नगरी सत्ता भएपछि सबै विषय समाधान हुन्छ भन्ने सोच्यो । जसको परिणाम आज भारतले लिपुलेक आफ्नो भएको नक्सा सार्वजनिक गर्यो ।
यो कूटनीतिक रूपमा नेपालको असफलता हो ?
पहिला कूटनीतिक रूपमा पहल नगरिएको होइन । १५ मे २०१५ मा नरेन्द्र मोदी चीन जाँदा भारत–चीनबीच वक्तव्य जारी भएको थियो । वक्तव्यको बुँदा नं. २८ मा लिपुलेकको विषय राखिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला छलफल चलायो । सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पूर्वतिरको लिपुलेक भन्ज्याङ, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र नेपालको हो भन्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला तत्कालीन सरकारले लिखित रूपमै भारत र चीनलाई लिपुलेक नेपालको हो भनेर पत्र पठाएको थियो । तर, अहिले सरकारले त्यसबारे प्रभावकारी कदम नचालेको हुनाले एकाएक यो विषय सार्वजनिक भयो । भारतले पनि यसरी छिमेकीलाई असर पार्ने र चिढ्याउने किसिमले नक्सामा राख्नु हुदैनथ्यो ।
नेपाली भूमिको विषयमा भारत र चीनले सम्झौता गर्न मिल्छ ?
यस्तो सम्झौता गर्न मिल्दैन । नेपालसँग छलफल नगरी नेपाली भूमिको विषयमा सम्झौता गर्नु हेपाहा प्रवृत्तिको परकाष्ठा हो । यसमा चीनभन्दा पनि भारत जिम्मेवार छ ।
नआउनुपर्ने समस्या आएको छ । अब त्यसलाई समाधान गर्न छलफल चलाउनुपर्छ । सरकारले ज्ञानबिनाको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुहुँदैन । समस्यालाई पहिचान गरेर कूटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य समस्या पहिचान गरी हामीसँग भएका प्रमाण जुटाई तर्कसंगत कुरा भारतसामु पेस गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, भारत यस विषयमा कन्भिन्स हुन्छ । नेपाली भूमि भारतले लिन सक्दैन । राजधानीबाट